Lawa amazwi weSekelashansela noMphathi ofulathela i-UKZN, uDkt Albert van Jaarsveld, oveze indlela abuka ngayo impilo emcimbini wokumvalelisa abenzelwe wona ekhempasini yaseNyuvesi i-Westville.
Yize u-van Jaarsveld ethe uzoyikhumbula i-UKZN, uhlulekile ukudlulwa yithuba lokuba uMqondisi-Jikelele noMphathi Omkhulu wesikhungo i-International Institute for Applied Systems Analysis lapho ezoqala khona umsebenzi wakhe ngezi-1 kuMfumfu (October). ‘ Yonke impilo yokusebenza kwami bengizama ukufeza inhloso yokuholela umphakathi womhlaba ekwenziweni ngcono komhlaba wethu kanye nobudlelwane bethu njengabaphila kulo mhlaba,’ kusho u-van Jaarsveld.
Uthe uzame ukwenza okufanele impilo yakhe yonke esebenza nokuthi kube yisibusiso nenhlanhla ukusebenza e-UKZN.
Obemele abasebenzi base-UKZN kanye nenyunyana i-University of KwaZulu-Natal Staff Union (UKSU), uMnu Raymond Parkies ubonge u-van Jaarsveld ngokuletha uzinzo nokubuyisa ithemba eNyuvesi kanye nokukhuthaza abasebenzi abese bedikibele. UParkies uhloniphe amagalelo ka-VC eNyuvesi, lapho egcizelele khona ukuhlanganiswa kwemibandela yokuqashwa okuyinto ewumlando wokukhulula abasebenzi abebexhashazwa abahweba ngabasebenzi. Uthe u-van Jaarsveld uwumuntu ozinikelayo nokuthi ubuholi bakhe obunombono bubonakale ngokuqokwa kwakhe esikhungweni i-International Institute for Applied Systems Analysis ese-Austria.
Oyisifundiswa sase-UKZN, uSolwazi Purshottama Reddy, unanele emazwini ka-Parkies okuthi i-VC ikwazile ukukhuthaza abasebenzi e-UKZN. U-Reddy uthe u-VC uguqule isimo waletha indawo enozinzo nokweneliseka kwabasebenzi. Uhloniphe iqhaza lika-VC ekuhlanganisweni kwemibandela yokuqashwa nokulekelela abasebenzi abebeyitoho. Uthe u-VC usezingeni lomhlaba. Yize noma ephatheke kabi ngokuhamba kwe-VC, kodwa umfisele okuhle kodwa esikhundleni sakhe esisha.
Ongumongameli Womkhandlu Wabafundi, uMnu Sandile Zondi, owaveza isu lakhe lokuncoma nokuphikisa uma exhumanana nabaphathi, uthe i-VC ibingumuntu ozithobile obezehlisa aze ayofinyelela nakubafundi akhulume nabo kanye nabasebenzi. UZondi uncome nenqubomgomo ye-VC yomnyango ohlale uvulekile, eveza nokuthi ubejwayele nokuthumela abafundi ku-VC ngqo futhi ne-VC ibibamukela abafundi ibhekane nezinkinga zabo.
UZondi uthe ufunde lukhulu ku-VC ngokwendlela yakhe yobuholi waphinde wamncoma ngokubeka induku ebandla eNyuvesi. Wamukele uSolwazi Nana Poku ozothatha esokuba isekelashansela noMphathi Oyibamba uma i-VC seyihamba ekupheleni kwenyanga.
OnguMongameli we-Enactus, uMnu Kwazi Zulu, wethulele i-VC isigqoko ngamagalelo emphakathini waseNyuvesi yonkana.